Jabuuti: 5 Qoddob oo ay kala Saxeexdeen Dowladda Federaalka iyo Somaliland - Horseed Media
Jabuuti: 5 Qoddob oo ay kala Saxeexdeen Dowladda Federaalka iyo Somaliland
Shirkii wada-hadalada dowladda federaalka ee Somaliya iyo Somaliland ee ka socday Waddanka Jabuuti ayaa caawa labadii dhinac ku kala saxeexdeen heshiis afgarad hordhac ah oo labada dhinacba isla qaateen.
Labada dhinac ayaa isla qaatay Shan qodob kuwaasi oo loo saaray Saddex guddi hoosaadyad oo ka wada shaqayn doono qodobadaasi, Waxaana ka mida qodabadaa uu Warbaahinta u akhriyey Shirgudoonka Shirka oo ah Wasiirka Arrimaha Dibada ee Jabuuti.
4. Waxaa ay labada dhinacba soo saareen guddi ka wada xaajoon doona Arrimaha Hawada, kuwaasi oo muddo shan iyo toban cisho ah ku shiridoona waddanka Jabuuti.
Wa shir fashilmay runti. Farmaajo wax meesha lama tagin. Mamulka Somali land la baxay waxuu raway raqaalo iyo ina laa arko ineey dad wax isku h a yaan.
Sidee maamulka laga handla hadaan maamul la wadaagin???? 15 tawankaan maalin waxa ka danbeesay Jabuuti aan rawin ina la arko kuwa fashilmay